Fitsoahana teny Antanimora : Nadoboka eny Tsiafahy i Solofoniaina -
AccueilSongandinaFitsoahana teny Antanimora : Nadoboka eny Tsiafahy i Solofoniaina
Fitsoahana teny Antanimora : Nadoboka eny Tsiafahy i Solofoniaina
Taorian’ny fihainoana azy teo anatrehan’ny fampanoavana ny tolakandron’ny 13 febroary lasa teo, dia nadoboka am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy avy hatrany i Raharijaona Solofoniaina, iray tamin’ireo gadra telolahy nandositra ny fonjan’Antanimora ny alin’ny 10 febroary . Noho iny fandikan-dalàna nataony iny, dia nitombo indray ny vesatra hiampangana ity voafonja ity, ary misy fiantraikany amin’ny fampitomboana ny sazy efainy ihany koa izany. Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ny kaomanda Herilalatiana Andrianarisaona, dia mbola tsy nisy olona nampiantsoana na nanaovana fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity teny amin’izy ireo. Mbola tsy nisy mantsy raha ny voalazany, ny fangatahan’ny eo anivon’ny fampanoavana taratasy hanatanterahana izany. Na izany aza dia mitohy hatrany ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo gadra roalahy hafa izay niray tsikombakomba sy niara-tafaporitsaka taminy tamin’io fotoana io. Raha tsiahivina, dia ny marainan’ny talata 13 febroary i Solofoniaina no tra-tehaky ny zandary teny Andriantany Ambohidratrimo teo am-pangalana vilona, rehefa nanaovana fikaroham-baovao nandritra ny andro vitsivitsy. Nalaina am-bavany teny amin’ny borigadin’ny zandary teny an-toerana izy avy eo, ary nentina teny fampanoavana teny amin’ny tribonaly Anosy. Ankoatra an’i Houcine Arfa izay efa tafavoaka teto Madagasikara, dia mbola misy gadra tsy latsaky ny fito , nitsoaka ny fonja eto Antananarivo sy ny manodidina hifampitadiavana fatratra amin’izao fotoana izao, ka vehivavy ny iray amin’izy ireo. Isan’izany Razafintsalama Soloniaina, Randriamalala Toky Setra Safidy, Rajoelina Christian Tanteraka ary Randrianarimanana, izay fantatra amin’ny solon’anarana ihany koa hoe Ratelo, gadra efa-dahy nitsoaka ny fonjaben’i Tsiafahy ny alin’ny 07 hifoha ny 08 oktobra 2017. Dimy moa izy ireo no indray tafaporitsaka saingy efa voasambotra, fotoana fohy taorian’ny nandosirany i Randriamparany David Rolland, rehefa niafina teny amin’ny fianakaviany teny Ambohimalaza. Manampy azy efa-dahy ireo i Rafalimanana Nirina Dominique sy Rakotoarisoa Henintsoa Raphalk, naman’i Solofoniaina. Isan’ny maha-fito azy ireo kosa i Lalao Adéline Aimmé, voafonja nitsoaka ny fonjan’i Manjakandriana tamin’ny taon-dasa.